လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း: August 2013
Saturday, August 31, 2013 ထွေရာလေးပါး
Samsung Galaxy S4, Galaxy Grand Duos တွေမှာ မြန်မာစာစနစ်ပါဝင်...
Saturday, August 31, 2013 နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ
Pregnancy (hCG) ကိုယ်ဝန်ရှိ-မရှိစစ်တဲ့ ဟော်မုန်း (၂) (18+)
Friday, August 30, 2013 အသက် (၁၈)နှစ်အထက် ဆေးစာများ
ကနေ့မနက်မှာ မေးလာတာရှိလို့ ရေးပါတယ်။ မေးခွန်းကို ရှာမတွေ့လို့ တိုက်ရိုက်မဖြေရသေးဘူး။ မေးခွန်းတွေကို အီးမေးလ်နဲ့ တိုက်ရိုက်တာလာတာက အကောင်းဆုံးဘဲ။ မဖျက်မချင်း ရှိနေတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာလဲ တင်တားတာတခုခုအောက်နေမေးတာ။ ကွန်မင့်ထဲရေးတာ၊ ချတ်ထဲရေးတာ အမျိုးမျိုးဘဲ။ လိုက်မဖတ်မိရင် မေးထားတာကို မသိတော့ဘူး။ မေးတာကို မဖြေရင်လဲ ရိုင်းရာကျတယ်။
Friday, August 30, 2013 စက်မှုရေးရာ
10. McLaren F1 Price: $970,000
Friday, August 30, 2013 Windows OS ဆိုင်ရာ
Friday, August 30, 2013 ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
Ericofon Telephones by Ericsson
Richard Mille Sapphire Watch – $1.7 million
2013 ခုနှစ်အတွင်း လူကြိုက်များတဲ့ ထိပ်တန်းဝင် Smartphone (၁၀)လုံး....
Friday, August 30, 2013 နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ
Friday, August 30, 2013 iOS Devices ဆိုင်ရာ
Friday, August 30, 2013 အနုပညာလက်ရာ
1. သားအိမ်-အလုံးကို သားအိမ် မထုတ်ပဲနဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ကုသနည်း အကြောင်းအား သိလိုပါသဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လည် ဖြေကြားစေလိုပါသည်။
2. အခုအသက် ၄၃ နှစ်မှာ အက်ထရာဆောင်း ရိုက်ကြည့်မှ Myoma ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။ Myoma က များလာပြီး သားဥပြွန်လဲ မမြင်ရတော့ဘူးလို့ ပြောတယ်။
Thursday, August 29, 2013 Android Apps & Games
ဖုန်း internet setting ကို ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ auto ထည့်ပေးမှာပါ ။ GSM/WCDMA / CDMA 800 / CDMA 800 (1500 Ks) တို့ရဲ့ အင်တာနက် setting များကို ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ထည့်သွင်းပေး ပါမယ်။ ဒီ app လေးကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် ဖုန်းမှာ Root access တော့ရှိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ အခု beta version မှာ ၁၅၀၀ တန် CDMA အတွက်တော့ သိပ်အဆင်မပြေသေးပါ ။ ယင်းအတွက် ကြိုးစားနေ ပါတယ်။
Thursday, August 29, 2013 ထူးဆန်းထွေလာ | ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
Thursday, August 29, 2013 ထူးဆန်းထွေလာ
Y300, G510, C8813, C8813D စတဲ့ ဖုန်းတွေကို code မတောင်းချင်သူများ တောင်းရတာအဆင်မပြေသူများအတွက် နည်းလမ်း...
(vroot နဲ့ဖောက်ရင် super user တရုတ်လိုပေါ်တာကို မကြိုက်ရင်ဒီနည်းလေးကို သုံးပါလုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်...... super user လှလှလေး english version လေးကို မြင်ရတာပေါ့)........(99% error မရှိ)
Myandroid v1.4 ကို Free Share ပေးလိုက်ပါတယ်…
ဒီ Tool လေးကနေ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ Function တွေကတော့...
- Zawgyi မြန်မာစာသွင်းနိုင်ခြင်း
- စံမြန်မာစာ သွင်းနိုင်ခြင်း
- Smart Zawgyi မြန်မာစာသွင်းနိုင်ခြင်း
- Android 4.0 Google App သွင်းနိုင်ခြင်း
- Android 4.1 Google App သွင်းနိုင်ခြင်း
-Andriud 4.2 Google App သွင်းနိုင်ခြင်း
- Pattern & Password ဖြတ်နိုင်ခြင်း
-Factory Reset လုပ်နိုင်ခြင်း
- Recovery Mode ၀င်ရောက်နိုင်ခြင်း
- Download Mode ၀င်ရောက်နိုင်ခြင်း
- Fastboot Mode ၀င်ရောက်နိုင်ခြင်း
- Adb Error များကို ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း တို့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အခြေခံကွန်ပြူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာချင်သူများအတွက် E-books များ (English Version)...
Thursday, August 29, 2013 E-Book များ
MPT Service v1.0.2(မြန့်မာဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မူ)...
MPT Service v1.0.2 လေးကတော့ အရင် v1.0.1 မှာ နယ်တွေမှာ ဖြစ်တက်တဲ့ ပြသနာလေးတွေကို ဖြေရှင်းပေးထားပါတယ်။
၇၃ တွေငွေဖြည့်ရင်တက်တဲ့ Error များကိုလည်း ဖြေရှင်းပေးထားပါတယ်။ ဒီApp လေးရဲ့ Featured တွေကတော့...
- GSM,CDMA လက်ကျန်ငွေစစ်နိုင်ခြင်း
- GSM,CDMA ငွေဖြည့်နိုင်ခြင်း
- GSM Internet လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း
- GSM အချင်းချင်း ငွေဖြည့်ပေးနိုင်ခြင်း
- GSM Internet Setting ချိန်နည်းထည့်သွင်းပေးထားခြင်း
- Voice Mail အကြောင်းရှင်းပြထားခြင်းများအပြင်
မြန်မာလို အညွန်းပိုင်းများစွာ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
Thursday, August 29, 2013 Anti-virus & Security
Clean Disk Security ဆော့ဝဲလ် လေးကတော့
HDD ထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင် Progarm တွေကို ဒုက္ခပေးမဲ့ မလိုအပ်တဲ့
ဖိုင်တွေ ကို ရှင်းလင်းပေပြီ ပေါ့ပါးသွက်လက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲကောင်း
တစ်ခုပါ... နောက်ထပ် Faatures များစွာ ပါဝင်ပါသေးတယ် . . အောက်မှာဒေါ်င်း
Wednesday, August 28, 2013 ထူးဆန်းထွေလာ